November 28, 2012 ကယ်ပါတိုင်းသား
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:ကဗျာ	3 Responses to တရုတ်ကျေးဇူး မြင့်မိုရ်ဦး (သျှိုးလိုက်ရတု) mgoogyaw on November 28, 2012 at 11:19 pm very very good. Burma is become one of the China division.We have to thank Chinese as our Thaye Zu Shin. Wan swe Wan swe,Par Par, Ar Shu, Ah Tae …doe yay.
မောင်ပျာလောင် on November 29, 2012 at 5:02 am ကယ်ပါတိုင်းသားရဲ့ တရုတ်ကျေးဇူး မြင့်မိုရ်ဦး (သျှိုးလိုက်ရတု) ကို အားကြပြီး ကျနော်ဖတ်ဖူးတဲ့ စာဆိုရှင်ကြီးဦးပုည ရဲ့ စေတီယဖွားဖက်တော် (စစ်ဗိုလ်ကြီးများ ကလိန်ဖွဲ့ တေးထပ်ခလေး) ကူးပေးလိုက်ပါတယ်၊ မလိန်တပ်တဲ့စစ်ဗိုလ်များ ဖတ်ကြည့်ပါ – – – စေတီယ လက်ထက်က၊ ဖွားဖက်တော်ရဲဗိုလ်၊ မဟုတ်မှသူဆိုတယ်၊ တကိုယ်လုံးမုသား၊ အလွဲမျာ့း ဘုရင်ငယ်၊ အလိမ်တွင်မင်းတရာ့ဖျား၊ အမှားမျာ့းဥသျှောင်ငယ်၊ အကောက်တောင်ပိုင်စား၊ သင်္ဘောပါ မှန်ကုန်များကို၊ မှားခေါ်လို့ ရောင်းစေ၊ မှန်ဆိုလျှင်အာကိုဖဲ့စေဟု၊ မောင်းလှည့်မယ့်လူစားပါပေတစ်မိုး၊ အောက်လူ့ ပြေမှာ သည်တဖေတပါးသာဖြင့်၊ မုသားစောင်ဖြူခြုံ၊ ပိန်းပိတ်လို့ မှုန်၊ မျက်လှည့်ကြီးညာဏ်စုံတယ်၊ လှည့်စားပုံဆန်းပေငဲ့လေး – –
၀တို့ ကိုဘဲ အပစ်ပုံချနေတယ်၊ လု့ တို့ စစ်ဗိုလ်ကီးတွေကိုတော့ ချိုမိုင်မိုင်လတု ကပြနေတုံးဘဲလား – – -
min thein kyaw on November 29, 2012 at 8:29 am တရုပ်ကြီးက ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ကျေးဇူးရှင်နံပါတ် ၁။ ဒါပေမဲ့ ပြည်သူ့ရန်သူနံပါတ် ၁။
ကျော်ဟုန်း - အများနဲ့ မတူ တမူကွဲခြားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း	တူမောင်ညို - စစ် + ခရိုနီခေတ်မှာ ဗိုလ်ကြီး “ကယ်ရီ” ဖြစ်ပြီ	ကာတွန်း လိုင်လုဏ် - လက်ရှိ မြန်မာ့ပညာရေး	ကာတွန်း မောင်ရစ် - Pull my leg - ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ	ဂါမဏိ - ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်မှာ လက်မှတ်ထိုးစရာ ...	ဓမ္မဘေရီ အရှင်ဝီရိယ - အပါယ်နဲ့ဝေးတဲ့လူ	အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) - လက်ဖက်ရည်ရောင်းသမားဘဝမှ နုိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်သုို့	ငြိမ်းချမ်းအေး - တော်လှန်ရေးဟာ စာသင်ခန်းက စရပါမယ်	ငြိမ်းချမ်းအေး - ကျနော် မန်ယူပရိသတ် ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်း	ကာတွန်း လိုင်လုဏ် - အစွမ်းကုန်	မိုးမခ Kindel Store
လူမှုရှုခင်း ကောက်စာများအနိစ္စတရာသုို့ အလည်အပတ်သွားခြင်း (ဖျော်ဖြေမှုအစီအစဉ်)
စာပဒေသာ ကောက်စာများဒိုင်နိုဆော (Khin Aung Aye)
မိုးမခမှာ အသစ်တင်တိုင်း သင့်အီးမေးထဲကို အရောက်ပို့မယ်။ Join 1,272 other subscribers
Twitter: moemakaငြိမ်းချမ်းအေး – ကျနော် မန်ယူပရိသတ် ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်း http://t.co/oEsu4ewjS3 about 13 hours ago ReplyRetweetFavoriteဇေမှိုင်း – ရုန်းကန်နေသော ….. သို့http://t.co/fwXXxWWUvl about 14 hours ago ReplyRetweetFavoriteအရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) – လက်ဖက်ရည်ရောင်းသမားဘဝမှ နုိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်သုို့ http://t.co/Y52fVfxGRR about 14 hours ago ReplyRetweetFavoriteအောင်ဝေး – ရ န် ကု န် ချီကျောင်းသား သ ပိ တ် တ ပ် ကြီးဘွဲ့( အ ပို င်း– ၄ ၊ နိ ဂုံး) http://t.co/2LnnocjkMi about 14 hours ago ReplyRetweetFavoriteဓမ္မဘေရီ အရှင်ဝီရိယ – အပါယ်နဲ့ဝေးတဲ့လူ http://t.co/tYeI4kd7gR about 14 hours ago ReplyRetweetFavorite@moemaka Copyright © 2015 MoeMaKa Burmese News & Media. All Rights Reserved.